uhlelo Sikhungo e-Ukraine. Ulwazi Iwusizo abafundi angaphandle
uhlelo Sikhungo e-Ukraine
Ukrainian ohlelweni lwezemfundo kulawulwa uMthetho-Ukraine futhi kuhlanganisa:
imfundo yamabanga aphakeme;
Imfundo yobuchwepheshe amakhono;
Ngoba Ukraine, Njengabantu abaningi baseYurophu, imfundo iqala nge semfundo pre-school, ngokuvamile – kusukela enkulisa. Ngo 2 (ngezinye izikhathi 1.5), izinyane uthola emkhombeni, nge 3 – eqenjini omncane.
Ngezinye izikhathi, umndeni enquma ukuba afundise ingane ekhaya, kodwa kusukela 2001, zasenkulisa imfundo okuyimpoqo izingane 5 iminyaka ubudala. Abazali bangakhetha izinkulisa noma iqembu kokuhlala, manje abangaphezu kuka- 1,000 amaqembu anjalo ezisebenza Ukraine. Ezikoleni zamabanga iqembu elisebenza sokulungiselela izingane esikoleni. abafundi Future khona ukuthola ulwazi oluyisisekelo, kanye bajwayelane indlela esikoleni, othisha nabanye abafundi ekilasini. With 6 iminyaka ubudala ingane kungaba ukuya esikoleni.
Kuphoqelekile futhi etholwe izinhlobo ezahlukene ezikoleni, esikhatsini lesinyenti – kulesi sikole secondary. It has amazinga amathathu:
I – isikole samabanga aphansi (amamaki 1-4), inikeza primary education jikelele,
II – isikole sebanga eliphansi (amamaki 5-9), ehlinzekela imfundo jikelele eyisisekelo;
III – Isikolo sebanga eliphezulu (amamaki 10-11), inikeza ephelele imfundo yesibili.
isikole Ukubeka – zonke-round ekukhuleni kwengane, simenze ukuthi ulwazi, edinga ukuba umphakathi. Sikolwa kufanele kugqugquzelwe professional lekutimela, ukuthuthukiswa ngokomzimba futhi kumiswa izindinganiso zokuziphatha futhi zokuziphatha eziyisisekelo.
ukuthuthukiswa engeziwe of amakhono langonyaka imfundo non-lehlelekile. Lezi zikole zihlanganisa amakilabhu ezemidlalo, izikole yobuciko, ezihlukahlukene amaqembu student kanye nezinhlangano ezifanayo, yomphakathi namkha yangeqadi.
Imfundo yobuchwepheshe amakhono
It wagxila ekutholeni okukhethekile othize. Ngakho, ngabo ukuba kuthunyelwe labo ezikhungweni zemfundo ukuthi aqeqeshe ubuchwepheshe ukusebenza. Lokhu izikole ezi ezikoleni zamabanga aphakeme (wobuciko, lobuchwepheshe, ephakeme), amafemu esikoleni kwezolimo nezimboni, ukuqeqeshwa izikhungo nasezindaweni ezifuze lezo. Baphinde zihlanganisa sokufundela ukuqeqeshwa izikhungo, ukuqeqeshwa kanye ukuphinda uqeqesho of abasebenzi.
Izikole Vocational ngokuvamile abambisane emabhizinisini – ukuqeqeshwa amakhasimende. Ukuze uthole ukusebenza umfundi mkhakha sisonke akudingeki ukuba ube khona esikoleni, ngoba bangaqeqeshwa ngqo ekukhiqizeni.
Imfundo ephakeme e-Ukraine lihleleke ngokuhambisana izinhlelo zemfundo eenarheni ezithuthukako, okuyinto iqondiswa by UNESCO, UN kanye nezinye izinhlangano zamazwe ngamazwe. Inikeza zesayensi ayisisekelo, ukuqeqeshwa professional and practical, ukuphinda uqeqesho kanye ziqu labafundi.
Amafomu yokufunda ezikhungweni zemfundo ephakeme ezihlukahlukene: isikhathi esigcwele, part-time, ibanga noma kuhlangene, okuyinto ihlanganisa eziningana zalezi amafomu.
Ngoba amanyuvesi, kukhona amazinga amane kwesikhathi sogunyazo:
I – esikoleni sokufundela amakhono kanye okulingana ezikhungweni zemfundo ephakeme;
II – College futhi akhiwa kuye nezikhungo zemfundo ephakeme;
III kanye IV (kuye ngokuthi imiphumela kwesikhathi sogunyazo) – institute, somculo, Academy, inyuvesi.
Kusukela 2008, imfuneko yokwemukela imfundo ephakeme sekudlule i nokuhlola ozimele yangaphandle (UPE). Ngo 2016, abafundi kuzothatha nokuhlolwa izihloko ezikhuluma:
ulimi Ukraine kanye nezincwadi, umlando wase-Ukraine (kusukela ezikhathini zasendulo kuze kube namuhla), i-chemistry, physics, biology, wezibalo, geography, kanye ne – isiZulu, Spanish, German, Russian and French.
Ngemva kokuthola iziqu ungathola degree – in the post-graduate futhi zobudokotela izifundo. Lokhu kuhlanganisa lokubhala kanye ukuvikela mqondo – PhD noma iziqu ngokulandelana – kanye nasekutholeni ucwaningo kanye nokufundisa nesipiliyoni.
imfundo postgraduate kwenza kube nokwenzeka ukuba bathole amakhwalifikheshini entsha, mkhakha noma umsebenzi. Ngokuvamile, lokhu kwenzeka ngesisekelo imfundo kakade atholwe esikoleni odlule, nakuba ungathola brand new and ezikhethekile. Ukuze iziqu ezikhungweni mfundo umisa (izikhungo), kuceceshwa noma ukuphinda uqeqesho, emayunithi efanele ezikhungweni zemfundo ephakeme, Tikhungo temfundvo sokufundela, isikhungo zesayensi kanye methodological of education amakhono kanye izingxenyana ezinhlanganweni namabhizinisi.